Pakistaan oo isaga baxday howlgalka burcad badeeda xili uu xum... | Universal Somali TV
Pakistaan oo isaga baxday howlgalka burcad badeeda xili uu xumaanayo xiriirka ay la leedahay Mareykanka
Ciidamada bada Pakistan ayaa isaga baxay howlgalka ka hortaga burcad badeeda ee gacan biyoodka galbeed ee hindiya oo loo yaqaan western Indian Ocean,oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (CTF).
Saraakiil ka tirsan ciidamada bada Pakistan oo la hadlay warbaahinta caalamiga ayaa sheegay in aysan sii wadi doonan howlgalkaan oo dowlado badan ay ku jiraan.
Go,aankan ayaa yimid kadib markii dowlada mareykanka oo howlgalkan hogaanka u heysa ay diiday in ay dhiibto tasiilaada ciidamada gaar ahaan shidaalka ay isticmaalaan maraakiibta iyo doomaha ciidamanka Pakistan.
Taliska ciidamada milatariga Pakistan ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in dalalka ku midoobay howlgalka ka dhanka ah burcad badeeda ay dareemi doonan,maqnaashiyaha Pakistan maadama ay qibrad ciidankooda u leeyahay dhanka bada.
Arintaan ayaa imaaneysa iyadoo bilihii la soo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka u dhaxeeya mareykanka iyo Pakistan.
Kan-xigaSideed kun oo bukaan oo u dhashay yem...
Kan-horeXaaska madaxii hore ee Interpol oo sh...
45,934,975 unique visits